राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दण्डहीनता : अनुपराज शर्मा
अन्तर्वार्ता/विचार मंगलबार, मंसिर २४, २०७६
सरकारका कामप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, “दण्डहीनता मानवअधिकारको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।”
मानवअधिकार संरक्षणमा सरकारको भूमिका कस्तो छ ?
सरकारबाट सहयोग र आक्रमण दुवै छ । कतिपय अपराधमा देखिएको दण्डहीनता मानवअधिकारको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। प्रहरीको तथ्याड्ढ अनुसार अपराध बढ्दैछ । पहिला जाहेरी नै नपर्ने कारण पनि अहिले अपराध बढेको देखिएको हुनसक्छ । तर, २० वटा जाहेरी पर्‍यो भने एउटामा कारबाही हुन्छ, अरु १९ वटा मेलमिलापमा टुङ्ग्याइन्छ । फौजदारी अपराधमा मेलमिलाप गराउनै पाइँदैन ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा सरकार किन कमजोर भयो ?
सरकारले जुन भूमिका हो, त्यो गरेन र जुन होइन, त्यो गर्‍यो । जस्तो, संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्ने समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । जसका कारण १० महीनादेखि सिफारिश भएको छैन । काम गर्ने मान्छे नभएपछि न्याय सम्पादन कमजोर हुने नै भयो ।
पीडितलाई न्याय दिने सवालमा मानवअधिकार आयोगले सरकारी वकिलको कार्यशैली माथि किन प्रश्न उठाएको हो ?
फौजदारी मुद्दामा सरकार वादी हुन्छ । सरकारी वकिलकै कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेका उदाहरण छन् । जस्तो, द्वन्द्वकालमा भएको मैना सुनुवार हत्याको मुद्दामा सरकारले अपील नगर्दा मुद्दा नै अलपत्र भयो । सरकारी वकिल राजनीतिबाट प्रभावित भए । हरेक घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने दण्डहीनता हुन्छ ।
अहिले मानवअधिकार आयोग र सरकारको द्वन्द्व बढेको हो ?
द्वन्द्व जहाँ थियो, त्यहीं छ । मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी गठन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भयो । हामीले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कुरा राखेपछि रोकियो । रोकिनु सकारात्मक हो तर, त्यस्तो विधेयक नै बन्नु हुँदैनथ्यो ।
मानवअधिकार आयोगका कतिपय सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन नि !
द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा नामै किटेर माओवादी कमाण्डर, सेना, प्रहरी र कतिपय सिडिओ विरुद्ध मुद्दा चलाउन गरिएको सिफारिश कार्यान्वयन भएन । अन्य सिफारिश भने कार्यान्वयन भएका छन् । सिफारिश कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय हो ।